मंगलग्रहबारे १० रोचक तथ्य: यस्ता छन् पृथ्वी र मंगलका फरकहरु | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २३ मंसिर २०७५, आईतवार २१:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । मंगलग्रहको बारेमा विस्तृत अध्ययनको लागि नासाले पठाएको इनसाइट ल्याण्डर गत सोमबार उक्त ग्रहको सतहमा पुगेको छ । उक्त यान गत ५ मेमा पृथ्वीबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
३० करोड माइल अर्थात् ४५ करोड ८ लाख किमिको दूरी पार गर्दै गत हप्ताको सोमबार मंगलग्रहमा पुगेको यान मंगलको सतहको एलिसियम प्लानिसिया नामको सफा मैदानमा अवतरण गरेको थियो । यो ठाउँ मंगलको भूमध्यरेखाको नजिक रहेको छ ।
यसको उद्देश्य मंगलको भित्री सतहको बनावट र रहस्यबारे खोतल्नु हुनेछ । उक्त यानले अहिले सौर्य शक्तिको लागि सोलार प्यानल फिँजाएर चार्ज गरिरहेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् ।
मंगल ग्रहको बारेमा खासगरी १० वटा रोचक तथ्य रहेका छन् –
१ हाम्रो सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहको कुरा गर्नुपर्दा मंगलग्रह सूर्यदेखि १४ करोड २ लाख माइलको दूरीमा छ । सौर्यमण्डलमा पृथ्वी तेस्रो नम्बरमा रहँदा मंगलग्रह चौँथो नम्बरमै रहेको छ । पृथ्वी सूर्यदेखि ९ करोड ३ लाख माइलको दूरीमा रहेको छ ।
२ पृथ्वीको तुलनामा मंगलग्रह लगभग यसको आधा रहेको छ । पृथ्वीको व्यास ७ हजार ९ सय २६ माइलको रहँदा मंगलको व्यास ४ हजार २ सय २० माइल छ । तर तौलको कुरा गर्दा मंगल पृथ्वीको दशौँ भागबराबर छ ।
३ मंगलले सूर्यलाई पूरा परिक्रमा गर्न ६ सय ८७ दिन लगाउँछ । यस आधारमा पृथ्वीको तुलनामा मंगल सूर्यको परिक्रमा गर्न दुई गुणा समय लिन्छ । मंगलमा ६ सय ८७ दिनको १ वर्ष हुन्छ ।
४ मंगलमा एक दिन २४ घण्टा ३७ मिनेटको हुन्छ ।
५ आँत कँपाउने चिसो, धूलैधूलोको आँधी पृथ्वीमा भन्दा ज्यादा हुन्छ । यद्यपि जीवनको लागि मंगलको भौगोलिक अवस्था निकै राम्रो मानिएको छ । गर्मीमा यहाँ सबैभन्दा धेरै ३० डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुन्छ भने जाडोमा शून्यबाट पनि घटेर १ सय ४० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ ।
६ पृथ्वीमा जस्तै मंगलमा पनि एक वर्षमा चार प्रकारका मौसम आउँछन् । पतझर, ग्रीष्म, शरद र शीत ती चार मौसम हुन् । पृथ्वीको तुलनामा मंगलमा हरेक मौसम लगभग दुई गुण बढी समयको हुन्छ ।
७ पृथ्वी र मंगलमा फरक गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहेकाले पृथ्वीमा १०० पाउण्ड तौलयुक्त व्यक्ति मंगलमा केवल ३८ पाउण्डको मात्रै हुन्छ ।
८ मंगलका दुईवटा चन्द्रमा छन्, फोबोस (१३.८माइल) र डेमियोस (७.८ माइल व्यास) ।
९ मंगल र पृथ्वी दुवै चार तहको बनावट भएका ग्रह हुन् । पहिलो क्रस्ट जुन फलामयुक्त बसाल्टिक पत्थरबाट, दोस्रो म्यान्टल जुन सिलिकेट पत्थर, तेस्रो र चौँथो बाहिरी र भित्री कोर हुन्, जुन पृथ्वीकै जथस्तो फलाम र निकेलबाट बनेको विश्वास गरिन्छ । तर एकदमै भित्री भागमा धातु तरलमा छ कि ठोसमा छ भन्न एकीन हुन बाँकी नै छ ।
१० मंगलको वातावरणमा ९६ प्रतिशत कार्बन डाई अक्साइड रहेको छ भने १.९३ प्रतिशत आर्गन, ०.१४ प्रतिशत अक्सिजन र २ प्रतिशत नाइट्रोजन रहेको छ ।
वैज्ञानिकहरुले यहाँको वातावरणमा कार्बन मोनोअक्साइडको संकेत समेत फेला पारेका छन् ।
ओली सरकारविरुद्ध ड्राइभरको कडा आन्दोलन
काठमाडौं । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बेवास्ता गरेपछि रुष्ट भएका ट्यांकर चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नेपाल आइडल लामाको आक्रोशः घरमा एक रुपैयाँ छैन गाडी ल्याउन कहाँबाट ल्याउनु ८ लाख ?
काठमाडौं । पहिलो नेपाल आईडल विजेता बुद्ध लामाले घोषित पुरस्कार नपाएको गुनासो गर्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
गत दशैमा सम्पन्न…
व्रत बस्दा खाइने साबूदाना शाकाहारी हो त ? यस्तो छ वास्तविकता
प्रसादको रुपमा भगवानलाई चढाउन प्रयोग गरिने साबूदाना व्रत बस्दा प्राय धेरैको घरमा खाइन्छ । तर व्रत बस्दा चोखो साकाहारी…
नातिनीको जोडपछि बैंककमा पूर्व श्री ५
काठमाडाैं । नातिनीको आग्रहलाई इन्कार गर्न नसकेपछि पूर्व श्री ५ ज्ञानेन्द्र बैंकक जान बाध्य भएका छन । कान्छी नातिनी…
श्रीलङ्का बिस्फोट : मृतकको संख्या २ सय ९० पुग्यो, अझै बढ्न सक्ने
काठमाडौं । श्रीलङ्कामा आइतबार चर्च र स्टार होटलहरुमा भएको श्रृंखलावद्ध बम विस्फोटमा परी मृत्यु हुनेको संख्या २ सय ९०…
‘गुन्द्रुक’ पनि चीनबाट अाउछ नेपालमा
काठमाडाैं । गुन्द्रुक नेपाली मौलिक तरकारी हो ।
देशभित्र मात्र होईन, विदेशका नेपालीका भान्छामा यो पुग्छ ।
निर्यातलाई आयातले थिचेको हाम्रो…